I-China Full Spectrum LED Ukukhanya okuPhakamileyo okuPhakamileyo koLawulo oluBukrelekrele Ukukhula koMzi-mveliso wokukhanya kwe-LED kunye nababoneleli | Virex
I-Spectrum egcweleyo ye-LED Ukukhanya okuPhakamileyo okuPhakamileyo koLawulo oluBukrelekrele kuYilo lokuKhula kokukhanya kwe-LED
Izibane ze-VIREX ze-LED zifanelekile kwishishini, ukulima ekhaya, ukusebenzisa izibane ze-LED zokukhula kunokuphucula imveliso yezityalo. Isibane sethu sokukhula sinoyilo lolawulo olukrelekrele kunye ne-Dimming knob.
Izibane zokuKhula ze-VIREX ze-LED zonyusa isivuno sesityalo kunye nokonga amandla ngokukhanya okuphezulu kunye nokubola okuncinci, okukunceda ukuba ufikelele umgangatho ophezulu kunye nobuninzi.
Ukukhanya okuguquguqukayo kokukhula kunye ne-spectrum epheleleyo, ukukhanya kokukhanya kunokulungelelaniswa ngokukhululekileyo kwizigaba ezahlukeneyo ngokweemfuno zokukhula kwezityalo, isibane esiphambili silula ukulawula, sifanelekile kwintengiso kunye negadi yasekhaya.
Ibhodi yokukhanya ivaliwe ukuze ungabi naxhala malunga neemeko zokukhula ezimanzi ezichaphazela ukukhanya kwezityalo.
Ukusonga okuguquguqukayo, kulula ukuyifaka kunye nokuhamba, gcina ikhaya lakho licocekile. Isakhiwo esilungiselelweyo, izinto eziphuculweyo, ubunzima obulula, ukufakela kunye nokusetyenziswa ngokulula. Ilungele ukutyala izindlu, iintente okanye izikafula.
1. Isiqinisekiso:ETL/DLC isatifikethi kuzo zonke iimveliso
2. I-Spectrum: I-spectrum epheleleyo
3. Ukuncipha: uyilo lolawulo olukrelekrele kunye ne-Dimming knob
4. Ifanelekile kwi-voltage epheleleyo 100-480V
5. 50000hrs:Ixesha elide lobomi: L90:>50000hrs
Igama lemveliso I-VIREX LED Khulisa ukukhanya
Amandla Factor >95%
Igalelo lombane 100-277V/277-480V
Ireyithi yokungaManzi IP66
1. Samkela umyalelo omncinci, unokubeka umyalelo omncinci ukuvavanya iimveliso zethu.
2. Sinikezela ngewaranti esemgangathweni yeminyaka emi-3, ngoko zikhululeke ukusithumelela i-imeyile ukuba unemibuzo okanye izinto ezikuxhalabisayo. Siya kuvuya ngakumbi ukukunceda.
3. Yonke imveliso yethu iya kuvavanya ngononophelo lisebe lethu le-QC ukuqinisekisa ukuba umgangatho kwizinga eliphezulu.
A: Ewe, sibonelela nge-OEM/ODM.
Q2: Ithini imiqathango yakho yokuhlawula?
Q3:Uzithumela njani iimpahla? Ingaba iza kuthatha ixesha elingakanani?
A: Ngokuqhelekileyo nge-express, ulwandle kunye nomzila.Amazwe ahlukeneyo anemida yamaxesha ahlukeneyo. Ngokuxhomekeke kukhetho lwakho, i-express idla ngokuthatha malunga neentsuku ezi-5-7, ulwandle kunye nololiwe kuthatha malunga neentsuku ezingama-25-45.
Ngaphambili: 16/19/24 I-intshi yesitya seLeaf Bud Trimmer Factory Supply Twisted Trimmer
Okulandelayo: Khulisa iTent Indoor Garden Plant High Quality 120 * 120 * 200 CM
Uyilo lwe-LED Khulisa ukuKhanya ngoLawulo oluBukrelekrele 660 L...
I-VIREX ye-LED ikhulisa ukukhanya usebenzisa izibane ezikhulayo kwi-Indo...